बजारमा छैन नियमन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
बजारमा छैन नियमन
फाल्गुन ५, २०७६ राजु चौधरी
काठमाडौँ — सत्तारूढ दल नेकपा (तत्कालीन एमाले र माओदावी केन्द्र) को संयुक्त चुनावी घोषणपत्रको मुख्यमध्ये एउटा बुँदामा भनिएको थियो– सबै पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने तथा मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिनेछ । कृत्रिम मूल्य वृद्धि, सिन्डिकेट, गुणस्तरहीन एवं भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगीलगायतलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।
घोषणा भएको दुई वर्ष पुगिसक्यो । कार्यान्वयन भने हुन सकेन । वाणिज्य विभागमा साविकको घरेलु कार्यालयसहित साढे पाँच लाख व्यावसायिक फार्म दर्ता रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक रवीन्द्र आचार्य बताउँछन् । यीबाहेक दर्ताबिना पनि प्रशस्तै फार्म सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये प्रायः पसलले मूल्यसूची नराखेको, लेबलबिना कारोबार गरेको र म्याद नाघेको सामान बिक्री गर्दै आएको पाइएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ४ हजार ९ सय १५ व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन भएको थियो । त्यसमध्ये ९१४ फार्मले मूल्यसूची नराखेको, ४९३ व्यावसायिक फार्मले साइनबोर्ड नराखेको, ६७३ फार्मले लेबल नभएका सामान बेचेको र ५५६ व्यावसायिक फार्मले म्याद नाघेका सामान बेचेको पाइएको आचार्यको भनाइ छ ।
विभागले ०७५/७६ मा अनुगमनको लक्ष्यसमेत भेट्टाउन सकेन । २ हजार ८ सय व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखेकामा विभागले १ हजार ६ सय ६१ मा मात्रै अनुगमन गर्‍यो । प्रायः फार्ममा उस्तै प्रकृतिको बिलबिजक जारी नगरेको, मूल्यसूची नराखेको, म्याद नाघेका सामान बिक्री गरेको र उच्च मूल्य लिएको पाइएको थियो । चालु आवको सात महिनामा ९५२ व्यावसायिक फार्ममा मात्रै अनुगमन भएको छ ।
व्यावसायिक फार्मले मूल्यसूची राखे पनि अपडेट भने नभएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुगमन अधिकृत दीपक पोखरेलले स्विकारे । ‘सबै पसलमा भन्न सक्दैनौं । अनुगमन भएकामध्ये ७० देखि ८० प्रतिशतले मूल्यसूची राखेका छन्,’ उनले भने, ‘म्याद नाघेका (गुणस्तरहीन) खाद्य सामग्री प्रशस्तै भेटिए ।’ अनुगमनका क्रममा ५० प्रतिशतभन्दा बढी पसलमा म्याद नाघेका वस्तु भेटिएको उनले बताए ।
वाम घोषणपत्रमा गुणस्तर नियमन गरिने उल्लेख भए पनि बजार अनुगमन सिजनल हुने गरेको उपभोक्ताकर्मीहरूको दाबी छ । दुई वर्षको अवधिमा बजारमा थप अराजकता बढेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिन्डिकेट र कालोबजारी कायम छ । प्रत्येक वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा अराजकता छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘कृत्रिम अभाव गराई मूल्य वृद्धि सिर्जना गरिएको छ ।’
लसुन, प्याज, मासु, कुखुरा चल्लालगायतको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढे पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । मूल्य बढ्नुपर्ने कुनै कारण नभए पनि खाने तेल, दाल, खुर्सानीलगायत वस्तुको मूल्य प्रतिलिटर/किलोमा १० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । नियामक निकाय विभागले भने बजार हस्तक्षेपमा चासो दिएको छैन । विगतको तुलनामा बजारमा सुधार भएको विभागका सूचना अधिकारी नोखबहादुर बस्यालको दाबी छ । कृत्रिम मूल्य वृद्धि, सिन्डिकेट, गुणस्तरहीनतालगायत विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।
खाद्यान्नका अतिरिक्त पेट्रोलियम क्षेत्रमा पनि व्यवसायीले कानुनविपरीत बन्द हडताल गरेका थिए । गत वैशाखमा ग्यास उद्योगीले कमिसन वृद्धिको माग गर्दै ग्यासको प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) उठाउन बन्द गरे । आन्दोलित उद्योगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो नेपाल आयल निगमले उद्योग खर्च, ढुवानीलगायत सम्पूर्ण खर्च यकिन नगरी तत्काल कमिसन दिने निर्णय गर्‍यो ।
माघ दोस्रो साता नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन हवाई इन्धन इकाई समितिले पनि हवाई इन्धन ढुवानी ठप्प पारे । अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन–०१७ मा अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा बन्द हडताल गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर व्यवसायीले सरकारलाई चुनौती दिँदै आन्दोलन गरे पनि कारबाही हुन सकेन । सरकार/नियामक निकाय व्यवसायीको चंगुलमा फस्दा बजारमा सुधार नदेखिएको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् । प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ १०:१४
फाल्गुन ५, २०७६ हिमेश
काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकामा जति पनि महत्त्वपूर्ण चाडपर्व मनाइन्छ, त्यसको तिथि मिति र विधिबारे यकिन हुन अझै पनि जनबहालतिर गएर सोध्ने चलन कायम नै छ । जनबहालको मछिन्द्रनाथका पुजारीले भनेपछि त्यसैअनुसार चाड पर्व मनाउने परम्परा अझै पनि भित्री काठमाडौंमा विद्यमान छ ।
अनि त्यसैअनुसार दसैं मनाइन्छ र नेपाल संवत् अनुसार मान्नु पर्ने अन्य पर्व पनि । काठमाडौंका सबैभन्दा पुरानो बस्तीमध्ये एक हो, जनबहाल । ऐतिहासिक रूपमै भन्नु पर्दा यो केलटोल नामले बढी चिनिन्छ । यहींको फुटबल क्लब हो, मछिन्द्र । अनि यसले भर्खरै जितेको छ, सहिद स्मारक लिगको ‘ए’ डिभिजन उपाधि । आर्मीविरुद्धको अन्तिम खेल जित्नु थियो, बराबरी पनि पर्याप्त थिएन । मछिन्द्रले यही निर्णायक खेल जित्यो र बन्यो, सहिद स्मारक लिगको १६ औं च्याम्पियन क्लब । यसको अर्थ हो, अब जही जनबहालको अर्को परिचय पनि थपिएको छ र यो परिचय हो, फुटबल च्याम्पियनको । फेरि इतिहासमै फर्कने हो भने काठमाडौंको सबैभन्दा पुरानो बस्तीका रूपमा मानिन्छ, हाँडीगाउँ । यहाँ कुनै ठूलो प्रकोप परेपछि लगनटोलतिर बस्ती बसेको मानिन्छ ।
त्यही बेला केलटोल पनि बसाइ बसेको थियो । कोलियाहरू आएर बसेको हुनाले केलटोल नाम रहेको पनि भनिन्छ । यी कोलियाको कालान्तारमा के भयो त ? यसबारे ठ्याक्कै उत्तर छैन, तर अनुमान गरिन्छ, सम्भवतः अहिलेका कंसाकार नै कोलिया हुन् । मीठो संयोग के भने मछिन्द्रका अहिलेका अध्यक्ष नै कंसाकार हुन्, प्रमोद कंसाकार । उनीसँग कुराकानी गर्नु पर्छ, थाहा हुन्छ, जनबहालका केही युवाहरू मिलेर धेरै अगाडिदेखि नै फुटबल खेल्ने गर्थे, तर त्यो व्यवस्थित थिएन । त्यहाँतिरका नाम चलेका पूर्व फुटबल खेलाडी हुन्, नीलकाजी शाक्य । अहिले उनी भित्री काठमाडौंका चर्चित र तगडा वडा अध्यक्ष पनि हुन् । उनकै समयतिर पनि मछिन्द्र नाममा फुटबल खेल्ने चलन भने बसिसकेको थियो । जति बेलादेखि व्यवस्थित रूपमा खेल्न थालेको हो, लामो समय ‘बी’ डिभिजनमै रह्यो, लगभग २९ वर्ष ।
मछिन्द्रले ‘ए’ डिभिजन खेलेको भर्खर २०६१ सालदेखि न हो । त्यस अगाडि एक प्रकारले मछिन्द्र आरसीटीको सफलता अगाडि ओझेलमा पर्‍यो । एक किलोमिटर भन्दा कम दूरीमा पर्छन, यी दुई क्लब । तर प्रतिद्वन्द्वी हुन् । आरसीटी त नेपाली लिग फुटबल इतिहासको पर्याय जस्तै हो । यसकै दबदबा अगाडि मछिन्द्र तीन दशकभन्दा लामो समय ओझेलमै पर्‍यो । अब अर्को संयोग कस्तो भने जति बेला आरसीटी ‘बी’ डिभिजनमा छ, मछिन्द्रले भने पहिलोपल्ट माथिल्लो डिभिजनको च्याम्पियन भएको छ ।
आरसीटी जब्बर टिम हुँदा त्यसबाट खेल्ने एक खेलाडी थिए, नीलकाजी । असन र भित्री काठमाडौतिर उनलाई नचिन्ने को नै होला र ? उनी राजनीतिक व्यक्तित्व त हुन् नै, अनि कलाकार पनि हुन् । नाटक र टेलिसिरिल पनि खेले, उनले । दशरथ रंगशालामा भएको अन्तिम दिनको खेलमा दौरा सुरुवालमा सज्जिएर आए । मछिन्द्रले उपाधि जितेपछि त उनको रौनकता नै बेग्लै भइसकेको थियो । उनी ट्रफी वितरण समारोह भइरहेको मञ्चमै पुगे र बने, पूरा काठमाडौं महानगरको प्रतिनिधि नै ।
आर्मीविरुद्धको त्यस अन्तिम खेलसँगै १ सय ४६ खेल खेलिसकेको छ । समयको आधारमा आधा दशक । केही वर्ष रेलिगेसन बच्न संघर्ष गरेको मछिन्द्रले केही वर्ष उपाधिका लागि बलियो चुनौती पनि पेस गरेको थियो, जस्तो ०७० मा । अहिलेका दुई ठूला स्टार रोहित चन्द र किरण लिम्बूलाई स्थापित गर्नुमा पनि मछिन्द्रको ठूलो र निर्णायक हात छ । यसबीच मछिन्द्रले यस्ता केही काम पनि गरेका छन्, जसलाई पटक्कै निको मान्न सकिन्न, भलै यसलाई सिद्ध गर्न ठोस प्रमाण छैन । तर त्यो समय नै त्यस्तो थियो, जति बेला यस्तै यस्तै खराव नियतले फुटबल खेलिन्थ्यो । अब समय फेरिएको छ र फेरिएको छ, नेपाली फुटबल पनि । अनि क्लबमा नयाँ व्यवस्थापन पनि आएको छ, अध्यक्ष छन्, तिनै कंसाकार । यसपल्ट पनि क्लबले उपाधि नै जित्ने मनसायले राम्रै खर्च गर्ने ठूलो मन बनाएको थियो र अब त नतिजा सबैसामु छ । नेपाली फुटबलले अपेक्षा गर्ने यही हो, मछिन्द्रले अबदेखि सधैं सफा मनले फुटबल खेल्ने छ र जित्ने छ, धेरैभन्दा धेरै उपाधि ।
किन उपाधि त ?
लिग सुरु हुन अगाडि कम्तीमा कागजमै सही, तय थियो, यसपल्ट लिग जित्ने सबैभन्दा बलियो टिम कुनै छ भने त्यो मछिन्द्र नै हो । मछिन्द्रले मनाङ मर्स्याङ्दी र थ्री स्टारका प्रमुख ठूला खेलाडीलाई आफूमा भित्र्याएको थियो । ठीक यही बेला मनाङ र थ्री स्टारले भने लगभग ठिक्कका खेलाडी खेलाउने नीति बनायो । उनीहरूको तर्क थियो, राम्रा भनिएका महँगा खेलाडीलाई मात्र खेलाएर के हुने हो र ? हुन पनि ‘ट्रेन्ड’ त्यस्तै बसेको थियो । यही बेला मछिन्द्रले भने ठूलो जोखिम उठायो । यसपल्टको लिगमा जम्मा जम्मी दुई टिमले मात्र फुटबलको ‘फिलोसफि’ अनुसार फुटबल खेले । बाँकी टिमले खेलेको त पुरानै नेपाली पाराले त हो, जता मन लाग्यो, उतै प्रहार गर्ने । मछिन्द्रसँगै आर्मीको खेल मात्र आधुनिक फुटबलको सिद्धान्त अनुसार रह्यो । मछिन्द्रले जति पनि खेलाडी अनुबन्ध गरेको थियो, त्यसमध्ये धेरै फुटबलको भाषा बुझेका थिए, त्यसो भनेको तिनीहरूले सानैदेखि प्राविधिक फुटबल खेल्न सिकेको थियो ।
यसका बावजुत पनि मछिन्द्रको यात्रा सजिलो थिएन् । लिग सुरु हुन अगाडि नै मछिन्द्रको एक अंक ऋनात्मक थियो, पोहोरको लिगमा पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको हुनाले । सुरुआती छ चरणको खेलमा मछिन्द्रले १३ अंक बटुलेको थियो, चार जित र दुई बराबरीमा । ठिक्कैको प्रदर्शन थियो, यो । च्यासल र मनाङसँग बराबरी खेलेको थियो । त्यस लगतै मछिन्द्रले हिमालयन शेर्पाविरुद्धको खेल भने २–० ले गुमायो । झरीबीच सातदोबाटोमा भएको त्यस खेलमा मछिन्द्रको केही पनि चलेन ।
तर यो हारको चोटले मछिन्द्रलाई ब्युँझाउने काम गर्‍यो र जित्यो, लगातार छ खेल । यो छ खेलमा मछिन्द्रको लय च्याम्पियन टिमकै जस्तो थियो । यो क्रममा मछिन्द्रले तीन महत्त्वपूर्ण जित निकाल्यो, पुलिस, थ्री स्टार र आर्मीविरुद्ध । यी तिनै खेलमा मछिन्द्रले ‘क्लिन सिट’ पनि कायम राख्यो । अब यस्तो प्रदर्शन गरेको टिमले नजिते कसले जित्ने त ? मछिन्द्रका प्रशिक्षक हुन्, प्रवेश कटुवाल । उनले यसपल्ट प्रशिक्षकका रूपमा ‘ए’ डिभिजनमा डेब्यु गरेका हुन् ।
यी प्रवेश आफ्नो भनाइ राख्नुपर्दा सबैभन्दा पहिले भन्ने गर्छन्, ‘पक्कै पनि ।’ उनको यो बानी जस्तै छ । त्यसलाई नक्कल गर्दै भन्नै पर्छ, मछिन्द्रले वास्तवमै सात खेलमा ‘क्लिन सिट’ राखेको थियो र यसले ‘पक्कै पनि’ देखाउँछ, मछिन्द्रको डिफेन्स कति बलियो छ भनेर ।
अनि यही टिमले पूरा लिगमै सबैभन्दा बढी गोल गरेको थियो, २५ । अब भनिरहनु पर्दैन, यो सबै उपलब्धिका लागि मछिन्द्रको मिडफिल्डले पनि त राम्रै योगदान दिएको थियो ।
मछिन्द्रका विदेशी खेलाडी पनि अरू टिमकोतुलनामा गतिला रहे । यो पनि मछिन्द्रले उपाधि जित्नु पछाडिको प्रमुख कारण रह्यो । मछिन्द्रले यसपल्टको लिगमा कुल २० खेलाडी उतारेको थियो । त्यसमध्ये विमल घर्तीमगर र हेमन गुरुङले त एकै खेल मात्र खेले । अन्यथा अधिकांश समय मछिन्द्रले समान खेलाडीको ‘सेट’ उतारेको थियो । धेरै प्रयोगको आवश्यकता नै परेन । त्यसमध्ये ११ खेलाडीले त गोल नै गरे । अनि रंजित धिमाल, विशाल श्रेष्ठ र विशाल राई ‘बी’ सबै१३ खेल खेले ।
प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ १०:१३